नेकपामा गजबको अभ्यास – निर्णय नेताको गोजीमा, दस्तावेज केन्द्रीय सदस्यको हातमा …हेर्नुहोस!
त्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू विभिन्न १५ समूहमा विभाजित भएर राजनीतिक, सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेका छन् ।
नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकको दोस्रो दिन बिहीवार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समूहगत छलफल गरी निष्कर्ष बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
४ सय ४५ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको नेकपाको यो दोस्रो पूर्ण बैठक हो । विधानतः ६/६ महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटी बैठक १८ महिनामा बसेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अभ्यास हेर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटी बैठक एक प्रकारको ‘मिनी महाधिवेशन’ हो ।
तर जम्बो सदस्य संख्या रहेको केन्द्रीय कमिटीमा छलफलका लागि सिमित एजेण्डा तोकिएको छ । बैठकमा एजेण्डाका रूपमा सहिदप्रति श्रद्धान्जली, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उद्घाटन र मतव्य, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिवले प्रस्तुत गर्ने दस्तावेज, सातवटै प्रदेशको संगठनात्मक प्रगति र समसामयिक विषय रहेका छन्
केन्द्रीय कमिटी बैठक शुरू हुनुभन्दा अगाडि कतिपय सदस्यहरूले बोल्न नपाइने चिन्ता गरेका थिए । यसअघि पुसमा सम्पन्न ४५ जना सदस्य रहेको स्थायी कमिटी बैठक पनि एक सातामा सम्पन्न भएको थियो भने ४ सय ४५ जना केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि जम्मा ५ दिन समय तोकिएको छ ।
ओलीको हेपाहा भाषण !
पार्टी एकता हुने दिन २०७५ जेठ ३ गते औपचारिकताका लागि मात्र बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक दोस्रोपटक १८ महिनापछि बस्यो । संसारभरिको कम्युनिस्ट पार्टीको अभ्यासलाई हेर्दा केन्द्रीय कमिटी सबैभन्दा बलियो र ठूलो संरचना हो । तर पार्टी एकीकरणपछि नेकपाभित्र केन्द्रीय कमिटी ‘हेला’मा परेको छ ।
एकीकरणपछि गरिएका पार्टीका लगभग सबै निर्णयहरू अध्यक्षद्वयले गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको हातमा दस्तावेज थमाइदिएका छन् । लामो समयको प्रतीक्षापछि सदस्यहरूले छलफलको काम त पाए तर त्यो पनि अध्यक्षद्वयले निर्दिष्ट गरेका एजेण्डाहरूमा मात्र ।
बैठक उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सरकारको बचाउ गर्न साढे २ घण्टा खर्चिए । सरकारको आलोचना हुन्छ भन्ने पूर्वाभास पाएरै ओलीले कुनै आर्थिक फोरममा बोल्नेजस्तो भाषण गरेका थिए ।
‘अध्यक्ष ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा जस्तो बोल्नुभयो,’ ओलीले अढाई घण्टा बोलेर सक्नेबित्तिकै बाहिर निस्केर चिनी नहालेको कालो कफीको कप हातमा समाउँदै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘हामीलाई हाम्रो अध्यक्ष बोलेजस्तो लागेन । उहाँले हामीलाई मिसगाइड गर्न खोज्नुभयो । समग्रमा भन्दा हाम्रो उपस्थितिलाई हेपेर निस्कनुभयो ।’
उनले सरकार आफैंले आफैंलाई बदनाम गरिरहेको पुष्टि भएको टिप्पणी गरे । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘हामीलाई अध्यक्ष ओलीबाट घुमाउरो भाषामा धम्कीपूर्ण सन्देश आयो । तिमीहरू एमसीसीका बारेमा बोल्न पाउँदैनौं, तिमीहरू यति होल्डीङको विरोध गर्न पाउँदैनौ । तिमीहरूले सरकारको कुनै आलोचना गर्न पाउँदैनौ । हामीले यस्तै अनुभव गर्यौं ।’
जब ओली निस्केर हिंडे
अढाई घण्टा सरकारको बचाउ गर्न मात्र खर्चिएका ओली भाषण सकिएलगत्तै उठेर हिंडे । कतिपयले कुनै भेटघाट भएको लख काटे बने कतिपयले डायलासिस गर्न अस्पताल जान लागेकोसमेत निस्कर्ष निकाले । तथापि बुधवार प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यतालिका थिएन ।
ओली निस्केर हिंडेपछि अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले रुखो टिप्पणी गरे, ‘नेता यसरी भाग्न हुन्नथ्यो । उहाँ डराएर निस्कनु भयो । आफ्ना कार्यकर्ताको कुरा सुन्न नसक्ने कम्युनिस्ट नेता मैले जिन्दगीमा पहिलोपटक देखें ।’
ओली निस्केलगत्तै सभाहलभित्र रहेका पत्रकार र अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि बाहिर निकालियो । तर भित्र भने चर्को स्वरमा केही केन्द्रीय सदस्यहरू चिच्याइरहेका थिए । तीमध्ये एक थिए राजेन्द्र राई । उनले ब्यानरमा दुई अध्यक्षको फोटो लगाएकोमा आपत्ति जनाए ।
सामन्तवादका विरुद्ध लामो समय संघर्षमा खर्चिएका राईजस्ता कतिपय अन्य नेताहरूलाई जीवित नेताको फोटो राखेर बैठक शुरू गरिएको पटक्कै मन परेन । राईलाई साथ दिँदै उठे जगन्नाथ खतिवडा ।
खतिवडाले ओली र प्रचण्डको विज्ञापन गर्ने निर्णय कुन कमिटीले गर्यो भनेर सोधेका थिए । तर अगाडि बसेका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका कुनै पनि नेताहरूले जवाफ दिन जरुरी ठानेनन् । खतिवडाकै भाषामा उनीहरू ‘लाज पचाएर’ बसे ।
अध्यक्षद्वयले नै एकताको सन्देश दिन सकेनन् !
अघिल्लो दिन केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दुवै अध्यक्षले एकमुखले सरकार र पार्टीको बचाउ गर्ने रणनीति बनेको थियो । सोही अनुरुप ओलीले सरकारले गरेका फेहरिस्त पेश गरेर बैठक छाडे । ओलीले बैठक छाडेर हिंडेपछि आलोचना सुन्ने जिम्मेवारी प्रचण्डको कानमा आएको छ ।
पार्टी एक भएको सन्देश दिनुपर्ने अध्यक्षद्वयबीच नै बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने विवाद भएपछि महासचिव पौडेलले बिनाअध्यक्ष कार्यक्रम संचालन गरे ।
‘अध्यक्ष ओली स्वास्थ्यका कारणले पनि लामो समय बैठकमा बस्न नसक्ने तर अध्यक्षता आफ्नो हुनुपर्ने दोहोरो कुरा गर्नुभयो,’ पूर्व माओवादी समूहका एक नेताले भने, ‘त्यसपछी कमरेड प्रचण्डले बिनाअध्यक्ष बैठक चलाउन प्रस्ताव गर्नुभयो ।’ कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले केन्द्रीय कमिटी बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
एकताको सन्देश दिनुपर्ने बेलामा अध्यक्षद्वयबीच नै मनमुटाव भएको सन्देश गएपछि कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरू अन्योलमा परे भने कतिपय आक्रोशित भएका छन् ।